MyYappyDog: Bulshada CRM ee Wakiilada Guryaha | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 2, 2014 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Waxaa jira ganacsi cusub oo xoogaa xoogaa ka jaraya Indianapolis Wakiilada guryaha, waana loo yaqaan Eeygayga Yappy. Haddii aad isku dari karto barxad isgaarsiineed oo fudud oo dhimis ah iyo madal maareynta xiriirka macaamiisha oo aan micno lahayn, waxaad haysataa Social CRM oo la yiraahdo My Yappy Dog.
3 ka mid ah 4 ka mid ah macaamiisha wakaalada guryaha ayaa sheegay inay mar kale la ganacsan doonaan wakiilkooda, laakiin kaliya 15% ayaa sameeya! Dawn Schnaiter, Aasaasihii Eeygayga Yappy.
Hadday wakiiladu uun heli lahaayeen xal la awoodi karo oo fudud oo ay ku joogteyn karaan xiriirka macaamiishooda, waa la heli lahaa marka dadkaas dib loo raro, ay u koraan guri weyn, ama marka qoysaskooda ama saaxiibadood ay raadinayaan inay wax iibiyaan. Dhammaan wakiilku waa inuu sameeyaa waa inuu taabto saldhigga xilliyo… iyo Eeygayga Yappy aan iyaga sidaas yeelno.
The Barxadda CRM ee bulshada wuxuu ka kooban yahay awoodda aad ugu dhajin karto dhammaan kanaalkaaga bulsheed, sanduuqa bulshada si aad u hesho sawirro, awoodda aad u diri karto oo aad u cabbiri karto ololeyaal emayl fara badan, iyo maareeyaha maaddada. Wadashaqeyntu waxaa lagu dhammeyn karaa iyadoo la adeegsanayo koontada kaaliyaha (oo aan lacag dheeraad ah laga qaadin) iyada oo oggolaansho isticmaale gaar ah laga helayo waxa ay arki karaan iyo wixii aan arki karin Iyo tan ugu fiican, ka warbixinta hawlahaaga, iibkaaga iyo kharashyada ayaa lagu daray!
Awoodda CRM waa mid weyn, oo kuu oggolaaneysa inaad tilmaamto macaamiisha ugu muhiimsan oo aad jadwal u sameyso howlaha lagula xiriirayo xilliyo iyaga ka mid ah.
3 Guji Yap!
Sanduuqa Warbaahinta Bulshada
Yoolalka iyo Kharashaadka
Sida bilowgii ugu weynaa, My Yappy Dog waxaa la aasaasay qof baahi qabay - Dawn wakiilka guryaha - Riann Stroud - maareeyaha wax soo saarka ee isku duba riday madal! Waan jeclahay bilaabida la dhisay maxaa yeelay isticmaaleyaashu way ka xumaadeen in xal loo heli waayo.
My Yppy Dog wuxuu siiyaa shaqsi, koox iyo shirkad binta!
Fiiro gaar ah: The Eeygayga Yappy madal run ahaantii waa kaamil ah qandaraasle kasta ama adeeg bixiye… la interface horeba customizable.
Tags: Email Marketingmyyappydoghantida maguurtadabixiyeyaasha adeeggabulshada crmmaaraynta xiriirka macaamiisha bulshadasanduuqa bulshadadaabacaha bulshada
Waa maxay Viral Marketing? Tusaalooyinka qaarkood iyo sababta ay ushaqeeyeen (ama usameeyeen)